Iyamangalisa i-83% yeeNkampani ezibetha ngokuphulwa koKhuseleko lwe-Cyber
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iyamangalisa i-83% yeeNkampani ezibetha ngokuphulwa koKhuseleko lwe-Cyber
Uphononongo olutsha lophando olwenziwe yi-Skybox Security lufumene ukuba i-83% yemibutho yafumana itekhnoloji yokusebenza (OT) ngokuphulwa kwe-cybersecurity kwiinyanga ezingaphambili ze-36. Uphando luphinde lwafumanisa ukuba imibutho ijongela phantsi umngcipheko we-cyberattack, kunye ne-73% ye-CIO kunye ne-CISOs "ithembele kakhulu" imibutho yabo ayiyi kuhlutha ukuphulwa kwe-OT kunyaka ozayo.
“Amashishini athembele kuphela kwi-OT, uluntu ngokubanzi luxhomekeke kobu buchwepheshe ngeenkonzo ezibalulekileyo ezibandakanya amandla kunye namanzi. Ngelishwa, i-cybercriminals zonke ziyaqonda ukuba ukhuseleko lweziseko ezingundoqo lubuthathaka ngokubanzi. Ngenxa yoko, abadlali besoyikiso bakholelwa ukuba uhlaselo lwe-ransomware kwi-OT lunokuhlawula kakhulu, utshilo umphathi weSkybox Security kunye noMseki uGidi Cohen. "Njengokuba ububi bukhula ngokungakhathali, uhlaselo lwe-ransomware luya kuqhubeka nokusebenzisa ubuthathaka be-OT logama ukungasebenzi kusaqhubeka."
Uphando olutsha, umngcipheko wokuSebenza we-cybersecurity ujongelwa phantsi kakhulu, utyhila idabi elinyukayo elijongene nokhuseleko lwe-OT-eliqulathe ukuntsokotha kwenethiwekhi, iisilos ezisebenzayo, umngcipheko wokubonelela, kunye neendlela ezilinganiselweyo zokulungisa ubuthathaka. Abadlali bogrogriso bathatha ithuba kobu buthathaka be-OT ngeendlela ezingafaki nje iinkampani ezizimeleyo - kodwa zigrogrise impilo yoluntu, ukhuseleko kunye noqoqosho.
• Imibutho iwujongela phantsi umngcipheko we-cyberattack Amashumi amahlanu anesithandathu eepesenti kubo bonke abaphendulileyo “babezithembe kakhulu” umbutho wabo awuzukufumana ukwaphulwa kwe-OT kulo nyaka uzayo. Nangona kunjalo, i-83% ikwatsho ukuba noko kwaphulwa kokhuseleko olunye lwe-OT kwiinyanga ezingaphambili ze-36. Ngaphandle kokubaluleka kwezi zixhobo, iindlela zokhuseleko ezikhoyo zihlala zibuthathaka okanye azikho.
• Uqhawulo lwe-CISO phakathi kwembono kunye nenyani Amashumi asixhenxe anesithathu eepesenti e-CIO kunye nee-CISOs aqiniseke kakhulu ukuba inkqubo yabo yokhuseleko ye-OT ayisayi kwaphulwa kulo nyaka uzayo. Xa kuthelekiswa ne-37% kuphela yabaphathi bezityalo, abanamava okuzibonela ngeziphumo zohlaselo. Ngelixa abanye benqaba ukukholelwa ukuba iinkqubo zabo ze-OT zisesichengeni, abanye bathi ukwaphulwa okulandelayo kujikeleze ikona.
• Ukuthobela akulingani nokhuseleko Ukuza kuthi ga ngoku, imigangatho yokuthotyelwa ingqineke ingonelanga ekuthinteleni izehlo zokhuseleko. Ukugcina ukuthotyelwa kwemimiselo kunye neemfuno kwakuyeyona nto ixhaphakileyo ephezulu kubo bonke abaphendulayo. Iimfuno zothotyelo lolawulo ziya kuqhubeka zisanda ngenxa yohlaselo lwakutsha nje kwiziseko ezingundoqo ezibalulekileyo.
• Ukuntsokotha kwandisa umngcipheko wokhuseleko Amashumi asixhenxe anesibhozo eepesenti athi ukuntsonkotha ngenxa yobugcisa babathengisi abaninzi ngumceli mngeni ekukhuseleni indawo yabo yeOT. Ukongezelela, i-39% yabo bonke abaphendulayo bathi umqobo ophezulu wokuphucula iinkqubo zokhuseleko zizigqibo zenziwa kwiiyunithi zoshishino ngamnye ngaphandle kokubeka iliso eliphakathi.
• I-inshurensi ye-Cyber ​​liability ibonwa yanele ngabanye amashumi amathathu anesine eepesenti yabaphenduli bathi i-inshurensi ye-cyber liability ithathwa njengesisombululo esaneleyo. Nangona kunjalo, i-inshurensi yetyala le-cyber ayiquki "ishishini elilahlekileyo" elinexabiso eliphuma kuhlaselo lwe-ransomware, enye yezona zinto zithathu eziphambili ezixhalabisayo zabaphenduli bophando.
• Ukuvezwa kunye nohlalutyo lwendlela zezona zinto ziphambili ngokhuseleko kwi-cybersecurity Amashumi amane anesihlanu eepesenti zee-CISOs neeCIOs zithi ukungakwazi ukwenza uhlalutyo lwendlela kuyo yonke indalo ukuqonda ukuba sesichengeni yenye yezinto ezibaxhalabisayo zokhuseleko ezintathu. Ngaphaya koko, ii-CISOs kunye neeCIOs zithe i-architecture engadityaniswanga kuyo yonke i-OT kunye ne-IT bume (48%) kunye nokudibana kobuchwepheshe be-IT (40%) zimbini kwimingcipheko yazo emithathu ephezulu yokhuseleko.
• Ii-silos ezisebenzayo zikhokelela ekuqhubeni izikhewu kunye nobunzima bobuchwephesha be-CIO, ii-CISO, ii-Architect, iiNjineli, kunye naBaphathi beZityalo zonke zidwelisa iisilo ezisebenzayo phakathi kwemingeni yazo ephezulu ekukhuseleni iziseko zophuhliso zeOT. Ukulawula ukhuseleko lwe-OT ngumdlalo weqela. Ukuba amalungu eqela asebenzisa iincwadi zokudlala ezahlukeneyo, akunakwenzeka ukuba aphumelele kunye.
• Ikhonkco lonikezelo kunye nomngcipheko womntu wesithathu yingozi enkulu I-46 yeepesenti yabaphenduli bathi ikhonkco lokubonelela / ukufikelela komntu wesithathu kuthungelwano ngomnye wemingcipheko emithathu ephezulu yokhuseleko. Nangona kunjalo, yi-XNUMX% kuphela ethe umbutho wabo njengomgaqo-nkqubo wokufikelela kumntu wesithathu osebenza kwi-OT.
• I-Navistar, Inc., uManejala woKhuseleko loLwazi uRobert Lynch: “Ezinye ii-CISO zinokuba nokuzithemba okungeyonyani kuba nangona sele zoniwe, azikayichongi le nto okwangoku; ngamanye amaxesha abahlaseli bakhona ixesha elide lokuseka indawo yabo. Kuyingozi ukuzithemba njengoko abantu ababi belungile.”
• I-Skybox yoKhuseleko lweLebhu yoPhando lweLebhu iTreat Intelligence Lead Sivan Nir: "I-intelligence yethu yobungozi ibonisa ukuba ubuthathaka obutsha kwi-OT benyuka nge-46% xa kuthelekiswa nesiqingatha sokuqala sika-2020. Ngaphandle kokunyuka kobuthathaka kunye nokuhlaselwa kwamva nje, amaqela amaninzi okhuseleko awenzi ukhuseleko lwe-OT lube yinto okuphambili kushishino. Ngoba? Esinye seziphumo ezimangalisayo kukuba abanye abasebenzi beqela lokhuseleko bayaphika ukuba basesichengeni kodwa bayavuma ukuba bophulwa. Inkolelo yokuba iziseko zabo zikhuselekile - ngaphandle kobungqina obuchaseneyo - ikhokelele kumanyathelo okhuseleko e-OT anganelanga. "
Ukuze ufunde ngakumbi, khuphela isifundo esipheleleyo sophando.
Uphononongo lophando lubandakanya iimpendulo ezivela kwi-179 OT abenzi bezigqibo zokhuseleko e-US, UK, Germany, nase-Australia. Uninzi lwabaphenduli (152) bebesuka kwiinkampani ezineedola ezi-1 okanye ngaphezulu kwingeniso ngaphakathi kwemveliso, amandla, kunye namashishini aluncedo.